Andry Rajoelina « Henjehana ny CVO satria avy aty Afrika”
Nivahiny tamin` ny haino aman-jery vahiny France 24 ny filoha Andry Rajoelina omaly niresaka momba ny tambavy Covid Organics [CVO] sy ny fampiasana izany ho fitsaboana ny mararin` ny aretina “coronavirus” eto Madagasikara.
Nanambara ny filoha fa noho ny fisotroana ity tambavy ity no nanasitrana ireo marary miisa 105 eto amintsika na dia tsy nandalo andrana ara-clinique” aza ny CVO. Namafisiny hatrany fa azo atokisana ny vokatra vokarin`ny IMRA. “Nahitàna fihatsarana ny fahasalaman` ireo marary ao anatin` ny 24 ora vantany vao mandray ity fanafody ity. Ao anaty fito hatramin` ny folo andro dia hita sy tsapa ny vokany. Natoraly ity fanafody fanefitra ity fa tsy toxique akory ». Voaresaka ihany koa fa tsy mankasitraka ny fampiasana amin`io tambavy io ny OMS kanefa tsy mbola nanakana kosa ny fampiasana ny tambavy ho fitsaboana izy ireo. Na dia eo aza ny fampitandremana, mitohy ny fizarana CVO amin` ireo firenena Afrikanina. Somary manana ahiahy kosa ny filoha manoloana ny zava-misy satria reharehan` ny kaontinanta Afrikanina ny CVO. “Raha firenena eoropeanina no nahita ity fanafody dia tsy nahitàna olana sy ahiahy toy izao ve ? Tsy mino aho (…) Ny olana dia avy aty Afrika ny fanafody. Tsy eken` ny hafa ny hoe firenena toa an` i Madagasikara, izay laharana faha-163 mahantra eran-tany, no nahità ny fanafody afaka mamonjy an` izao tontolo izao. Notsiahiviny hatrany fa Madagasikara dia mbola mitahiry ny fitsaboana lovain-jafy ary notsipihany fa maro ireo fanafody hankatoavina amin` ireo firenena tandrefana no ahiana ny vokany amin` ny zanak` olombelona toy ny “Mediator” any Frantsa. Tsisy fiaraha-mitantana Voaresaka ny momba ireo Iles Eparses izay nangingina tato ho ato ny fitakiana izany. Nanambara ny filoha Rajoelina fa efa mitady ny vahaolana sy marimaritra iraisana amin`i Lafrantsa mikasika ny famerenana ireo nosy ireo ho an`ny Malagasy mialoha ny 26 jona izao izay daty voatondro. Efa ho herintaona tokoa no najoro ny vaomiera manokana ary tokony tamin` ny volana martsa ny fihaonana faharoa. Notsipihany mazava tsara fa famerenana ireo nosy no takiana fa tsy fiaraha-mitantana.